अन्माएर विदा गर्ने बेला बेहुलीको मृ त्यु , कसरी ? - News 88 Post
अन्माएर विदा गर्ने बेला बेहुलीको मृ त्यु , कसरी ?
July 4, 2021 N88LeaveaComment on अन्माएर विदा गर्ने बेला बेहुलीको मृ त्यु , कसरी ?
विवाह कार्यक्रम सकि एपछि बेहुलीलाई अन्माएर विदा गर्ने बेला नवविवाहिता बेहुलीको मृ त्यु भएको दुखत खबर सार्वजनिक भएको छ । ती बेहुली विदाइका बेला अत्याधिक रोएका कारण उनलाई रुँदारुँदै हृद य घात भएर मृ त्यु भएको बताइएकाे छ ।
शुक्रबार बिहान भारतको ओडिशा राज्यको सुवर्णपुर जिल्लाको बिनिका ब्लक अन्तर्गतको जुलुन्दा गाउँमा ती नवविवाहिताको मृ त्यु भएको ओडिशाको राजधानी भुवनेश्वरबाट संचालित टेलिभिजन च्यानल कलिंगा टिभीले जनाएको छ ।
शुक्रबार बिहान बेहुलीको विदाइको कार्य क्रम हुँदै थियो । यही बीचमा लगातार रोइरहेकी बेहुली अचानक बेहोस भएर ढलिन् । बेहुलीलाई तत्कालै नजिकैको अस्पताल लिएर गएकोमा उनको मृत्यु भइसकेको थियो । स्थानीय डुंगुरीपाली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टरहरुले रोजीलाई अस्प’ताल ल्याउँदा नै उनको मृ त्यु भइसकेको बताएका थिए ।
नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु मेरो बाध्यता थियो : माधव नेपाल ! १६३ नम्बरमा दर्ता पार्टीको नाम के छ ?
ठमेलको ‘एलओडी’ क्लवका मालिक गोरखा कांग्रेसबाट निर्वाचित
September 2, 2021 N88